Migraine muVana uye Vachiri Kuyaruka | Bezzia
Maria Jose Roldan | 23/07/2021 22:07 | Mazano amai
Iyo data inoratidza kuti migraine ndiyo yakajairika mhando yemusoro wepasirese. Muchiitiko chevana nevechiri kuyaruka, vangangoita 75% yavo vanoona migraine pane imwe nguva muhupenyu hwavo.
Muchinyorwa chinotevera tichataura pamusoro pezviratidzo zvakajairika zve migraine muvana nevechiri kuyaruka uye zvinoitwa nevabereki kurerutsa zviratidzo zvakadaro.
1 Zviratidzo zvemigraine
2 Pazera ripi vana vangatanga kuve nemagraines?
3 Kuongorora migraines muvana
4 Maitiro ekugadzirisa migraines muvana
Kune akatiwandei ezviratidzo anobatsira kusiyanisa migraine kubva kune mamwe marudzi emusoro:
Migraine inoonekwa pakarepo uye nekukurumidza.
Marwadzo anowanzo bata chimwe chikamu chemusoro, kunyangwe ichigona zvakare kuitika pamwe nehuma yese yemwana.
Kurwadziwa kwakasimba inowanzo kuperekedzwa nekurutsa uye kusvotwa.
Kurwadziwa mumusoro kunowedzera zvakanyanya nemujenya wechiedza uye nemimwe mhere.
Migraine inowanzo dzoka nekufamba kwenguva nehukuru hwakanyanya kana hushoma.
Vana vanowanzo kuve nerudzi kana kirasi yemigraine inozivikanwa seyemagraine ine aura. Mune iyi mhando yemigraine, pamberi pemusoro wemusoro mwana ane imwe nhevedzano yezviratidzo sekuneta kwakasimba kana kusajeka kuona. Kunyange zvazvo migraine imwe neimwe yakasiyana, zvakajairika kuti vagare pakati peawa mana nemazuva matatu.
Pazera ripi vana vangatanga kuve nemagraines?
Chinhu chakajairwa ndechekuti zvikamu zve migraine zvinoitika kubva pamakore manomwe kana masere. Kashoma kwazvo kuti mwana mudiki arwadziwe zvakanyanya uye zvakanyanya kutemwa nemusoro. Migraine inogona kuitika mune vese vakomana nevasikana zvisina kujeka.
Kuongorora migraines muvana
Vanopfuura hafu yevana vanotambura nemagraines kazhinji vane hama yepedyo iyo inowanzo shungurudzika navo. Izvi zvakakosha kana uchiita zvakanaka kuongororwa. Neongororo yepanyama uye kuziva nhoroondo, chiremba anowanzove akarurama kana achiongorora migraine.
Maitiro ekugadzirisa migraines muvana
Kune akatiwandei ezvinhu ane njodzi anogona kuratidza chikonzero nei mudiki achitambura nemusoro wakadai senge migraine:
Kudya kwezvimwe zvekudya senge chokoreti kana chizi. Panyaya yevechiri kuyaruka, kunwa doro nguva dzose kunogonawo kuve chikonzero chemusoro wemusoro.
Hupenyu hwakanyanya kunetsa.
Hormonal shanduko kuti vechidiki vanotambura kusvika pakuyaruka
Kurara kwakaipa uye kushomeka kwakaringana kwekurara.
Kana vabereki vakaona kuti mwana wavo ane migraine, zvakakosha kuvabatsira kuzorora munzvimbo isina mwenje kana ruzha. Zvinogona kuitika kuti kurara kunobatsira migraine kuenda. Kana iwe ukaona kuti kunyangwe zvasara, iyo migraine haiende, unogona kupa paracetamol yekudzora kurwadziwa kwakanyanya. Kana zvisinei nezvose, iyo migraine haisati yanyangarika, zvakakosha kuendesa mwana kuna chiremba kuti atange kurapwa kwakakodzera senge prophylaxis.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Mazano amai » Migraine muVana uye Vachiri Kuyaruka
Maitiro ekugadzira yakasarudzika capsule wadhiropu
Matangi echisikigo mubindu: imwe nzira isingawanzo